Caalamka, 29 September 2018
Sabti 29 September 2018
Madaxweynihii Vietnam oo geeriyooday
Madaxweynehii dalka Vietnam, Tran Dai Quang ayaa maanta geeriyooday isaga oo ay da’diisu aheyd 91 sano, kadib xanuun uu muddo la jiifay.
Qiimo dhac ku yimid lacagaha Turkey iyo Iran
Shinzo Abe oo dib loo doortay
Ra’iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe ayaa mar kale loo doortay inuu sii ahaado hogaamiyaha xisbiga talada haya ee dalkaas, kadib marki uu si aqlabiyad leh ugu guuleystay doorasho ka dhex-dhacday xisbiga Liberal Democratic.
40 sano kadib heshiiskii Masar iyo Israel
Natiijada Doorashadi Sweden oo Lagu Dhawaaqay
Guddiga doorashada Sweden oo maanta ku dhawaaqay natiijada rasmiga ah ee doorashooyinkii baarlamaaniga ee Sweden ka dhacay sagaalki bishaan September, ayaa sheegay in xisbiga talada haya ee Social Democratic uu ku guuleystay codadka ugu badan ee doorashada.
Duufaanta Mangkhut oo Garaaceysa Shiinaha
Dabeylo xawaarahoodu sarreeyo iyo roobab culus oo ay keentay duufaanta loogu magacdaray Mangkhut ayaa hadda garaaceysa jaziiradda Hong Kong iyo xeebaha bari ee dalka Shiinaha.
Doorashada Sweden: 7 Ruux oo Soomaali ah oo Xilal ku Guuleystay
Illaa iyo 7 ruux oo Soomaali ah ayaa ku soo baxay doorashooyinkii guud ee dhawaantan ka dhacay dalka Sweden. Leyla Cali Cilmi, ayaa ka mid ah dadka doorashada baarlamaan ee dalkaasi ku guuleystay.